I-La Maison Bleue, ikhishi elizimele elihlanganyelwayo - I-Airbnb
I-La Maison Bleue, ikhishi elizimele elihlanganyelwayo
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Isabelle
Ifulethi elizimele elingaphakathi kwendlu - lixhunywe ekhishini elabelwe ngezitebhisi zangaphakathi. Izindawo zokusingatha kwenye indawo yendlu enkulu
Gcoba ubuhle nokuthula Kwezintaba e-La Maison Bleue, esendaweni ekahle ukuhamba ibanga elide ukuya enhliziyweni ye-Leura, le suite INDEPENDENT, etholakala ngaphakathi kwendlu enkulu, inamagumbi okulala angu-2, (1 main nombhede we-QS - enye w/ NOMA 2 S NOMA 1 K) 1 w/igumbi lokuphumula elikhulu nebhavu le-spa. SINGAMATHA ESIZINDAWENI kodwa ngingahlela ukuthi ngingabi khona ngesicelo namalungiselelo okubambisana
5-10 IMIZUZU UHAMBA USUKA E-LEURA VILLAGE
Ukuthintwa okuncane kweParis ukuze uhlale eBlue Mountains. I-Flat ILIMILE kodwa iyingxenye yendlu. Ukusingatha emagcekeni.
I-Escape City Life: Gcoba ubuhle nokuthula kwe-Blue Mountains e-La Maison Bleue, etholakala phakathi nohambo olulula lokuya enhliziyweni ye-Leura. Itholakala ku-Murray Street, le ndlu enkulu inendawo yokuphumula ephezulu namagumbi okulala ama-2 kanye nebhavu le-spa.
Ungadla isidlo sasekuseni ekhishini lepulani elivulekile kanye nendawo yokudlela noma kumaveranda abanzi.
Uzojabulela ukungena kwakho kwangasese, igceke kanye ne-carport.
Uzimele ngaphakathi kwendlu enkulu.
I-Leura Village iwumphakathi omncane omuhle, owaziwa ngokuthenga kwawo kwakudala, amathilomu nezindawo zokudlela kanye nokufinyelela okulula kumathrekhi okuhamba ehlathini afanele yonke iminyaka namazinga okuqina.
Kungakhathaliseki ukuthi ubheke ukuzwa ukudla newayini lesifunda, noma uphishekele imisebenzi yokuphumula noma ukwelashwa kwe-spa yansuku zonke, i-La Maison Bleue ijabule ukukusiza uhlele imisebenzi yakho ukuze wenze okuningi ngokuhlala kwakho.
Ikhishi & Indawo yokudlela: Sebenzisa ikhishi elikhulu elivulekile futhi ujabulele imibono ngenkathi ulungisa ukudla kwakho ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Amakamelo okulala: Amakamelo amabili amakhulu okulala abekwe kahle anelineni elicolekileyo namaduvethi, okhaphethi abawubukhazikhazi, izibani ezithambile kanye nokushisisa. Amalineni engeziwe namathawula ayatholakala uma uwacela. Isitoreji esikhulu; i-wardrobe yokungena.
Igumbi lokugezela: Ngemva kokubona iBlue Mountains nobuhle bayo obumangelengele, ungabuyela endaweni yokukhanyisa ikhandlela endlini yakho yokugezela.
Ukusikisela kwe-France: Gxila kusiko lesi-French ngokujabulisa izinzwa zakho ngomculo othile wesi-French, izincwadi namamuvi. Thatha ithuba lefa le-French hostess ukuze uhlele izikhathi zengxoxo yesiFulentshi noma ukufundisa.
ubusuku obungu-7 e- Leura
4.93 · 381 okushiwo abanye
Kwakuwuthando ekuqaleni, nakuba siseduze kakhulu neLeura Village, indlu isendaweni ethule futhi enokuthula, uzozizwa uqhelelene nakho konke. Ukubuka kwezihlahla phezulu kanye nezinyoni ezinhle ukuze uhlale unenkampani.
Ngiyathanda ukuhlangana nawe futhi ngikusize, ngiyajabula ukuba nobudlelwano nokuba khona kwakho kodwa futhi ngihloniphe ubumfihlo bakho.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-1578